मोबाइलबाटै परिचय भएका एक जोडी केटा केटीले अनुहारै नहेरी बिहे गरे, बिहे पछि केटाको घरमा पुग्दा त श्रीमती चकित - Hulaki Samachar
बेसाहारा हेमा श्रेष्ठ रुदै आइन श्रीमानको कर्तुत बताउन्,एक्लो मलाई साहारको कस्ले दिन्छ(हेर्नुहोस भिडियो)
पराइसँग फेसबुकमा धेरै कुरा गर्ने श्रीमती १९ दिन देखि छोरी सहित बेपत्ता, श्रीमान रुदै मिडियामा(भिडियो)
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अभियानबाट हटाइएपछि भावुक हुँदै खोले विबादको वास्तविक रहस्य (भिडियो)
महरालाई थुना मुक्त गर्न माग गर्दै रोशनी पुगिन अदालत,कस्तो नाटक फेरी ?(भिडियो हेर्नुस्)
नर्स पढेकी बुहारीले जव ससुराको पैसाकै कारण यस्तो गरेको आरोप लगाए श्रीमानले (भिडियो हेर्नुहोस )
महरालाई थु नामुक्त गर्न माग गर्दै रोशनी पुगिन अदालत,रोशनी को यो कस्तो नाटक (भिडियो हेर्नुहोस)
२० दिनको सुत्केरी श्रीमती छाेडेर श्रीमान बेपत्ता,दुईवटा बच्चालाई खान दिन सकेको छैन भन्दै रुदै बिजोक(भिडियो हेर्नुस्)
जव आफ्नै श्रीमानले जीवनभर नभुल्ने पिडा दिए, रुँ,दा,रुँ,दै अन्तर्वार्ता नै सकियो(भिडियो हेर्नुहोस)
रविना बादिले जस्लाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग सुटुक्क किन गरिन विवाह ?(भिडियो हेर्नुहोस)
पुजाको पाँच बर्से छोरो जसलाई ६ महिनाको हुदा बाबू आमाले छाडेका थिए हेर्नुहोस मनै रुवाउने भिडियो
मुख्य पृष्ठ /रोचक/मोबाइलबाटै परिचय भएका एक जोडी केटा केटीले अनुहारै नहेरी बिहे गरे, बिहे पछि केटाको घरमा पुग्दा त श्रीमती चकित
21,784 1 minute read
भनिन्छ माया प्रेम अन्धो हुन्छ भनेर त्यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ। फेसबुकको माध्याम बाट लभ गरेर अनुहारनै नहेरी बिहे गर्न लाग्दा यस्तो घटना हुन पुगेको छ । बिज्ञान र प्रविधिको युगमा बिकाश संगसंगै यसको बिकृति पनि समजामा देख्न सकिन्छ । अनेक खालका मान्छे सामाजिक संजालमा जोडिएका छन भने कतिपयले यसलाई गलत कामको लागिनै प्रयोग गर्ने पनि पाईएको छ। आज भोलिको जबानामा मान्छे नहेरी बिस्वास गर्नु यक्दमै गलत हो । तेसैले हेरेर बिचार गरेर मात्र बिस्वास गर्नु होस ।
एजेन्सी:-पर्समा यी चिज बोक्नुहोस हुनेछैन धनको अभाब:: पुरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुनेछ । धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला ररु जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन ।तर लाखौ कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन
आफ्नो पर्स मा धनकी देवी माता लक्ष्मी को तस्बिर राख्नुहोस। माता लक्ष्मी को कृपाले तपाइको आफ्नो पर्स कहिले खाली हुने छैन। साथसाथै अन्य धन कमाउने कयौ मौका मिल्दछ।आफ्नो गोजीमा कमलको दाना अर्थात् कमलको बिजको दाना राख्नाले तपाइसग पैसा को कमि कहिँले हुने छैन। माता लक्ष्मीको कृपा सधैं सधैं रहिरहने छ ।पर्समा अक्षता राख्नाले पनि बडि भन्दा बडी फाइदा हुन्छ। भनिन्छ कि पर्समा थोरै चामल राख्नले फजुल खर्च रोकिन्छ।गोजीमा श्रीयंत्र राख्नले पैसा सग जोडिएका सबै काम कुराहरुमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधै आफ्नो पर्स मा राख्नुहोस।पर्समा सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुन्छ।
तपाइको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन र साथै जागिरमा पनि बढुवा हुन्छ।धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला ररु जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन ।तर लाखौ कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ।
यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले तपाइको गोजी कहिले खाली हुने छैन।
आफ्नो पर्स मा धनकी देवी माता लक्ष्मी को तस्बिर राख्नुहोस। माता लक्ष्मी को कृपाले तपाइको आफ्नो पर्स कहिले खाली हुने छैन। साथसाथै अन्य धन कमाउने कयौ मौका मिल्दछ।आफ्नो गोजीमा कमलको दाना अर्थात् कमलको बिजको दाना राख्नाले तपाइसग पैसा को कमि कहिँले हुने छैन। माता लक्ष्मीको कृपा सधैं सधैं रहिरहने छ ।
पर्समा अक्षता राख्नाले पनि बडि भन्दा बडी फाइदा हुन्छ। भनिन्छ कि पर्समा थोरै चामल राख्नले फजुल खर्च रोकिन्छ।गोजीमा श्रीयंत्र राख्नले पैसा सग जोडिएका सबै काम कुराहरुमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधै आफ्नो पर्स मा राख्नुहोस।पर्समा सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुन्छ। तपाइको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन र साथै जागिरमा पनि बढुवा हुन्छ।
सुन्दर बन्न चाहनुहुन्छ,यी काम गर्नुस ! महिला मित्रहरुले नछुटाइकन पढ्नुहोला
एक पटक अवश्य २ मिनेट निकालेर पढ्नुहोस ! आफूमा आएको दुर्भाग्यलाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने ।
यी हुन् धनलाभ हुने २१ वटा संकेतहरु :
साहसी महिला जसले काटिदिइन बलात्कारीको लिंग
महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण पूरा पढ्नु होस ।